Jwxo-shiil iyo Kooxdiisu waa Dad Oodan oo ay Ilbaxnimadu ka Fog Tahay – Rasaasa News
Aug 9, 2010 Jwxo-shiil, nabad diid, Ogaden, ONLF, somalia
Hal kudhaga sanadkan Jwxo-shiil “ma doonayo in ay nabad ka dhacdo Ogadeeniya waligeed “BBC.” Ficilada ay ku dhaqmayaan Jwxo-shiil iyo kooxdiisu waa dabeecadaha Jaahilnimada aadna waxay uga fog yihiin ilbaxnimada iyo dhaqanka magaalnimada [geel jireyaal, magaalo yimid].
Waxay nolol qaxootinimo ka bilaabeen dalalka reer galbeedka, ka dibna waxay qaateen shuruucda dalalkaas, dalalka reer galbeedka waxaa ka xaaraan ah dagaal iyo camal xumo.
Waxyaabaha lagu dagaalamo ee ugu badan dalalka ilbaxay waa qalinka iyo xanta midaas oo qof waliba uu ku qanacsan yahay.
Dalalka reer galbeedka hadii la isu xoog sheegto laguma noolaadeen, dadyow badan oo qaxootinimo ku soo galayna ma ayna yimaadeen, nabada ka jirta awgeed ayaa soo jiidatay dadweyne badan oo kala gadisan.
Waxaa wax laga naxo ah, xishood la,aanta iyo dabeecadaha reer miyinimada ah ee ay ku dhaqmayaan kooxda Jwxo-shiil.
Jaaliyada aan ahayn kooxda Jwxo-shiil, shir kuma qaban karto dalalka reer galbeedka. Dawlada Itobiya dalkeeda Jaaliyadiisa dibadaha degan shir umma qaban karto, hadii ay qabtaan waanu dilaynaa, waa arimo laga naxo oo ilbaxnimada aad uga fog.
Arimahani waxay ka mid yihiin dabeecadaha reer miyiga iyo kali talisnimada, waana mida keentay in lagu heshiin waayo halgankii ay ONLF waday, ee keentay in uu Jwxo-shiil, sharci iyo xeerba jabiyo jeclaystana in uu xoog ku joogo masuuliyada qadyada dadka oo dhan ka dhaxaysay.
Waxaan isweydiinayaa hadiiba intii yarayd ay sidan tahay tolow hadii aan xornimo helo wax ma naga hadhi lahaa mise waan dhamaan lahayn. waxaan hubaa in aan is dhamayn lahayn, sidaas daraareed waxaan qabaa in ummada Somalida Ogadeeniya ayna bislayn.
Bal dhawra magacyadan ragan duqayda ah ee Maraykan badhtankii budhadhka la ordi ee ku qamaamaya in ay dilaan dad wadaniyiin ah iyo wafti wadan ka timid oo u martiya dalka Maraykanka.
Gurey Macalin Yuusuf
Kuligood maanta way xidhan yihiin waxaana la hor keenidoonaa maxkamad cadaysa dunuubta ay galeen, waxaana suurto gal ah in dhamaantood lagu celiya dhulka Somalida Ogadeeniya.